सरकार र विप्लवको वार्ता टोली बन्यो तर बनेन वार्ताको वातावरण ! – Saurahaonline.com
काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिवन्धित नेकपासँग वार्ताका लागि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपनि वार्ताका पूर्वशर्त पूरा हुन सकेका छैनन् । वार्ताका लागि पूर्वसर्त पूरा नहुँदा वार्ताको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल संयोजक र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको छ । विप्लवले खड्बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा उदय चलाउने दिपक सदस्य रहेको वार्ता टोली सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
वार्ताका लागि दुवै टोली तयारी अवस्थामा रहे पनि विप्लव समूहले राखेका वार्ताका पूर्वशर्तको प्रक्रिया अघि नबढ्दा वार्ता हुन सकेको छैन । वार्ताका लागि विप्लव समूहका नेताहरु सोमबार नै राजधानी प्रवेश गरिसकेका छन् ।
वार्ताका लागि विप्लव समूहले दुई शर्त राखेका छन् । प्रतिवन्ध फुकुवा हुनुपर्ने पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने शर्त विप्लव समूहको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको छैन भने पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन ।
मंगलबार साँझ नै वार्ता हुने बताइएको थियो । प्रक्रियागत समस्याले मंगलबार वार्ता हुन नसकेको विप्लव समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा. भट्टराईले भने मंगलबार वार्ताको कुनै तयारी नभएको जानकारी दिए ।
विप्लव समूहको वार्ता टोली निकट स्रोतल भन्यो, ‘प्रतिवन्ध फुकुवा र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्ने वातावरण बन्यो भने बुधबार वार्ता हुन्छ ।’
हिंसात्मक तथा आतंककारी गतिविधि गरेको भनी सरकारले २०७५ फागुन फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय सरकारी तवरबाट समेत वार्ताका लागि पहल भएपछि विप्लव समूहले सहज वातावरणमा राजनीतिक गर्ने परिस्थिति बनाइए वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विप्लव समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध, मुद्दा र हतियार व्यवस्थापन आदिबारे वार्ताबाटै टुंगो लगाइने बताए ।